Yammuu Akkaataan Lakkaawwii tokko uumamu, maqaan lakkaawwiitti ramadama. Kanaafituu, qajojiileen kana fakkaataan lakkaawwii "Moggaasa" kanaan waamamu. Lakkaawwiin hinmoggafamne, warri dhangeessuu sirriif fayyadan, kan qaaqa yk sajoowwan Rasasaa fi lakkaawwiikabala wanta keessatti uumamuu danda'a.
Haalatoota rasaasa garagaraa fayyadamuu dandeessu agarsiisa.
Rasaasaa fi Lakkaawwiin keeyyataa kan gargaaraman Barreessaan, Impireesii fi Fakkaasuu dhaani.
Haalatoota lakkoofsa kennuu adda addaa fayyadamuu danddessu agarsiisa.
Haalatoota gara garaa tarree sadarkaa waatti fayyadamuu dandeessuu agarsisa. LibreOffice hanga sadarkaalee toorii sagaliitti sadarkaa tarree keessaa deeggara.
Saxaatoo adda addaa akka rasaasaatti tarree rasaasame keessatti fayyadamtu agarsiisa.
Galumsa addaan fageenyaa fi dirqaalee hiriifamaa lakkoofsa ykn tarree rasaasa'eef qindeessa.
Title is: Akkaataa Lakkaawwii